Ndezvipi zvinonyanya kukosha SEO mazano ekutsanangura meta?
Meta tsanangudzo dzinoshandiswa kupa webhusaiti rese ruzivo rwakakosha mukukanda-kuburikidza nehuwandu (CTR), pakupedzisira inoguma nekushandurwa kwakanaka kwepamusoro uye mamwe mapeji epamusoro muSERPs. Uye chikamu cheshumba chema webmasters, zvisingarevi mazita aiti webhusaiti ari kuita bhizinesi, akawana kunzwisisa kwakanyatsojeka kwehurukuro yose, zvisinei kuti zvingaita sezviri nyore sei vedu vazhinji. Saka, ngationei mazano anonyatsoshanda eSOO kuti tishandure meta tsanangudzo dzenyu mumakona chaiwo eCTR-generating.
Maererano nemitemo yakawanda yaMo, meta tsanangudzo yakareba inofanira kuwanikwa mukati memavara 150-160. Sangano rezvenzvi kuSemalt, somuenzaniso, rakandiudza chinangwa chavo pachavo chemashoko matsva pasi pemakumi mashanu neshanu. Chero chipi zvacho chiripo chairo, iyi haisi iyo yenyaya yedu pane mazano ESEO. Nezvehurefu, iwe meta tsanangudzo inofanira kuumbwa semashoko akazara kukurudzira mushumiri kuti aenderere nekuaverenga. Dambudziko rakaoma kwazvo pano nderokuedza kuva netsanangudzo yakakwana, iyo inoenda kudarika vanhu 160, saka ichibviswa kubva kuSERPs. Ingozvidzivisa kuita saizvozvo.
Ndinofunga kuti chinhu chikuru chemashoko ekutsanangura apa chiri kupa hunokosha hunodiwa kune mutengi. Uye pane dzimwe nguva hapana SEO mazano, ndinoreva nezvekukosha kwavo. Tsanangudzo imwe neimwe ye meta inofanira kuva yakasiyana uye inonyatsojekesa chipo chacho pachayo, izvi zvose pamusoro pekukosha kwayo. Tichifunga nezvekukwikwidza kwakasimba, ndinokurudzira kuongorora kuti pfungwa ndeyepi meta dzinotsanangurwa dzinoshandiswa nevakwikwidzi vako vanobudirira. Nenzira iyo, kunyora yako pachako kuedza kufunga mibvunzo miviri iri nyore kubva pakuona kwemushandisi. Ingozvibvunza kuti zvipi nezvipimo kana mapeji peji rino rinofanira kupa, uye nekuda kwezvikonzero zvipi zvingangodaro ndive nechokuita kuti ndiende.
Hazvina maturo kutaura, tsanangudzo yemeta imwe neimwe inomiririra kushambadzira kwako paSERPs, ndiyo yako yekutengesa zvinyorwa zvingaratidzwa zviri pasi pezvikwata zvakatsvaga zvitsvaga. Saka, ikozvino inoshanda kwauri, uye hauna imwe mazano eSEO, asi kuvhara marondedzero ako ega ega nemakfupi CTAs (call-to-action) kana zvinowanikwa mukati memutumbi wayo. Kuita kudaro, iwe uchava nekunakidza kwakanaka kune yako-click-through rate. Panguva imwecheteyo, inogona kukubatsira kuti uve wakasiyana zvikuru uye udzike kubva kune vadzivisi vako - zvose mune imwe.
Yeuka iwe uri kuramba uri kurwisana neGoogle AdWords, iyo inogona kutora zvinyorwa zvina zvemashoko ako makuru. Zvichipa kuti iwe wakasununguka kuva neruzivo rwekubatsira kwemeta meta tsanangudzo, ndinokurudzira kuchengeta ziso kune wako oga muvengi kuti uite zvigadziriswe nenguva. Kana iwe uine tarenda yakakwana, ita zvose zvaunogona kuita kuti meta yako tsanangudzo irege kutarisa zvishoma sekutengeserana. Nenzira iyo, zviziviso zvakabhadharwa neGoogle AdWords zvinogona kukubatsira iwe kudhonza zvimwe-kudarika. Edza kuita saizvozvo - kuedza, kuongorora, nekugadzirisa. Ingoramba uchitarisa kuti ndezvipi zvimwe zvigadziriro zvaunenge uchipikisana nazvo Source .